‪#‎Harargee‬-Dammaqaa OBSAAN DUBBISI – Welcome to bilisummaa
‪#‎Harargee‬-Dammaqaa OBSAAN DUBBISI
jalqabamee? Barreeysaa: Mahfuuz
(Harargee D irraa) Qabsoon hawaasa
muslimaa qabsoo bara
keeysatti belbelaa tureetu qabsoo
sababa ta’e. Mormiin baratoota
madrasaa ‪#‎Awaliyaa‬ hulaa ka’umsaa
malee ka’umsi qaboo
keenyaa rakkoo bara
dheeraati <mirgaa fi haqa> amantii dhabuu
keeysaa bahee gara
angootti eega dhufee
booda mirga amantii
dabalatee mirgoota sabaa fi sablamoota,
eeguufi biyya bulchhuf
waadaa galuus, ilaalcha bosana isa
walii ture irra adda
bahuu hin dandeenye.
ummata baldhaati fi naamusa biyyattii
eeguuf akka bahee irra
haarawaan kun akka
hangaasutti ifee deebi’ee dukkana
jachuuniis heeraa fi
seerri haaroyni kun
ummata baldhaa ittiin
sobuu fi malee qabatamaan hojii irraa
olchuuf kan yaadamee
miti. Obboleeyyan Islaamaa
haqa muslimaa eeguuf hin dhaabannee. hundi
Islaamaa balleeysuu fi
dhabamsiisuuf yaalii cimaa goddhaa turan.
adawwiin Islaamaa ‪#‎wayaaneen‬ mootiiwwanii fi
irraa kan isa adda
godhu ‪#‎xilaata_gaadidduu_hin_qabnee‬ waan taheefi dha.
Asteewwan durii dirre
balleeysuu fi Muslima
dhabamsiisuuf ka’uu isaanii himaa turan.
hin qabnee dha. Miidiyaa irratti haqaaf
akka dhaabate lallabaa
lafa jalaan ammoo
dhabamsiisuu fi Islaama balleysuuf
hojachaa jira. Adeemsi
wayyaanee adeemsa ‪#‎yahuudii‬ Israa’el waan taheef hojiinsaa
dirree bahee namatti
eeysa badee mee ka’a naa wajji barbaadaa
ja’a. Karaa lafa
sirraa kaasaa karaa
dirree irratti ammoo sii cinaa hiriira bahee
sii wajjiin morma. Eeyyen #wayaaneen
adawwii gadidduu hin
qabnee dha. Akkataa
sii balleeysu osoo hin
bayne sii balleeysa.
Maaliif jannaan #yahuudii irraa
qara’ee waan dhufeef
badii malee khayrii
tokkolle hin qabu. Adeemsi wayaanee
bahee hundi keenyaa
baynee jirra. Haata’u
ammoo waggaa 23’n
darban guutuu karaa icitii fi karaa
Islaamaa fi Muslima
irratti duulaa ture. Ka’umsi qabsoo
sababa koreen teenya
Qabsoon kun koreen
teenya osoo hin filatamiin dura
hulaa yookiin bantuu
haata’uu malee..ka’umsi qabsoo
fe’aa jiru obsa keenyaa ol tahuu isaatni.
gargaarsaa) sadarkaa sadarkaa dhaan
jalatti buluu bira
saamamee jira. Amantiin teenya ‪#‎Islaam‬ isanif mijjaawuu dinnaan
Ahbaash fidanii dirqii
dhaan nurratti fee’an.
Hardha “mirga kana
qabna” kan jannu tokkolleen hin jiru.
Badii tokko malee
badee jira. Dhiynii hawaasa muslimaa
dhangala’ee jira. Uleen
caccabee jira. Manni
muslima nagayaatiin guuttame jira. Manni
irra dhaabatee mana
taphaa, mana joollee,
mana kijibaa tahee jira. Ka’umsi qabsoo
keenya hidhaa koree
teenyaan kan ka’ee
teenyaa fi obboleeyyan keenya
hidhaa irraa bilisa
baasuu dhaan kan
xumuramu miti. Koree teenyaa fi
qabsoo isa tokko
tahee haga dirree injifannoo(nasriitti)
kan itti fufu ta’a. Shakkii tokko malee
teenya gabaabaa dha.
teenyaa dhihoo dha. IN SHAA ALLAH!
Previous Seenaa Gabaabaa Aadde Faaxumaa Galmoo (Haadha Abdii) 1930-2014
Next SOMAAN GOOTAA URGAAYEE